NLD ကိုမကြိုဆိုရဲ. . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » NLD ကိုမကြိုဆိုရဲ. . .
NLD ကိုမကြိုဆိုရဲ. . .
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on Mar 27, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
25.3.2012 ရက်နေ့ တုန်းက NLD နာယက ဦးတင်ဦး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းကို လာခဲ့ပါတယ် ။ အင်ပင် မြို့ကို ညနေ 6.00 ကျော်မှာရောက်ပါတယ် ။ မြန်အောင်၊ ကြံခင်း ဘက်မှ NLD ပါတီဝင်လူငယ် မောင်မယ် များစွာ ဟာ ကား၊ ဆိုင်ကယ် များစွာဖြင့် ကြိုဆိုကြပါတယ် ။နဖူးစည်းတွေ ၊ အလံတွေ ၊ ဦးထုပ်တွေ နဲ့ လမ်းအပြည့်ဘဲလို့ ပြောပါတယ် ။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း ထွက်ကြိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အမျာကြီးရှိပါတယ် ။ မြန်အောင် ကိုရောက်တော့ ည 12.00 လောက်ဖြစ်နေပါပြီ ။ မြို့ထဲကို ပတ်သေးတယ်လို့ ပြောပြပါတယ် ။ အဲဒီနောက် မြို့ထဲက ပါတီရုံးမှာ ခေတ္တ အနားယူပြီးတော့ ကြံခင်းမြို့ကို သွားအိပ်ပါတယ် ။ 26.3.2012 မနက် 9.00 နာရီမှာ မြန်အောင်မြို့ရှိ ဆန်းသစ်ဦး ရုပ်ရှင်ရုံ မှာ ဟောပြောပွဲပြုလုပ်တယ် လို့ ပြောပါတယ် ။ ပြဿနာက အဲဒီမှာ စတော့တာပါပဲ ။ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှုတွေ ဖြတ်တောက် ခံလိုက်ရပါတယ် ။ ဘယ်ကိုမှ ဆက်လို့လည်းမရတော့ပါဘူး လို့ပြောပါတယ် ။ နှစ်ရက်လောက် ဖုန်းခေါ်လို့ မရတော့ပါဘူး ။ တုံးက အပြည့်တက်ပြီးတော့ ခေါ်လို့မရတာ ပါ ။ 26.3.2012 နေ့လည်ပိုင်း အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဟောပြောပွဲ ထပ်မံ ပြုလုပ်ကြောင်းဆက်ပြောသွာပါတယ် ။
ကျွန်တော့အထင်ကတော့ အဲဒီလို မလုပ်သင့်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။ ရိုင်းလွန်းတယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ မပြောရဲကြပါဘူး ။ မနေ့ကလည်း တစ်နေ့လုံး လိုင်း တက်လို့ မရဘူး ။ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလည်း မသိတော့ပါဘူး ။ လွပ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဝေခွင့် ၊ လွပ်လပ်စွာ စည်တန်းလှည့်လည် ခွင့် ၊ လိုချင်ပါတယ် ။ မတရား ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေ အများကြီးက မပြောတတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ မပြောရဲလို့ ပါ ။
ကျွန်တော့ကို ထင်မြင်ချက်လေး ပေးပါဦး
ကျွန်တော့် ထင်မြင်ချက် လုံးဝ (လုံးဝ) မပါဝင်ပါ. .
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပြောပြသည်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။
ချစ်ရင်ထူးနှစ် ကို ပြောခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပါ ။
ထင်မြင်ချက်ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဘာအရေးလဲဗျာ
အခု ခင်ဗျားပြောချင်တာက ဟိုဖက်က အတိုက်အခံတွေ
ရဲရဲပြောပါ…အချက်အလက် တိကျဖို့သာ အဓိကပါ…
အကျင့်တွေက အရိုးဆွဲနေပြီ။ ပိတ်မယ် ဆို့မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။
လောလောဆယ်က သူတို့က စင်ပေါ်ကဖြစ်နေတာကိုး။
လူထုကို … ကစားနေတယ်လို့ထင်တယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့.. အစိုးရနဲ့.. အတည်ညှိနှိုင်းပြီးလို့.. ထင်တယ်..
ရလဒ်လည်း ထွက်ပြီးသားလို့.. တွက်မိတယ်..
ရလဒ်ဘာလည်း.. သိချင်လား.. ၁ရက်နေ့ကျပြောပြမယ်..
အေးဆေးစောင့်ကြည့်ပြီး.. လုပ်စရာကိုသာ.. ရဲရဲလုပ်.. ရဲရဲပြောကြပါလို့…
ကြောက်စရာ မရှိပါဘူးဗျာ။ တကယ်တော့ သူတို့ ကြောက်နေတာပါ။
အမေစုကိုရော NLD ကိုရော ပြည်သူတွေကိုရော ကြောက်နေကြတာ။
သူတို့က စင်ပေါ်ကိုရောက်နေပေမယ့် သူတို့အကြောင်း သူတို့သိတယ်လေ။
အဲဒီတော့ ညစ်မှနိုင်မယ်ဆိုတာသိတော့ ညစ်ကြပြီပေါ့ဗျာ။
မကြောက်ပါနဲ့။ ရဲရဲသာပြောပါ။ အဓိက က အချက်အလက် ခိုင်မာဖို့ ပဲ
လိုတာပါ။ အခုအချိန်ထိ ကြောက်နေသေးရင် နောင်ဆို ဘယ်တော့မှ
ပြောခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြည်သူတွေ ညီညွတ်ရင် ဒီကောင်တွေ
ပြည်သူတွေ ညီညွတ်ဖို့ ဆိုတာက အသ်ိပညာ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှ ရနိုင်မှာလေ. . .
အဲဒီဘက်ကို ပိတ်ထားသေးတယ်ဗျ. . .
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေ ညီဖို့ကတော့ အဓိက လိုအပ်ချက်ပေါ့ဗျာ. . .
မြန်အောင်ကို 25.3.2012 နေ့မနက်ကစပြီးဖုန်းခေါ်လို့မရတာပါ ။
25 ရက်နေ့ညနေမှာပြန်ခေါ်လို့ရတယ် ။
သူတို့မလဲ… တစ်ထွာတစ်မိုက်ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေလေးနဲ့ … ဒါလေးပိတ်လိုက် .. ဒါလေးဖြတ်လိုက်ပဲ .. အလုပ်ရှုပ်နေတယ် … ။
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ … ဒီအကြိမ်မှဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ .. အကြိမ်ကြိမ် လုပ်နေကြအကွက်တွေမို့ … သူတို့အကွက်တွေလောက်တော့ .. အန်တိုနေပြီလို့ ပြောလို့ရတယ် … ။
အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် … မျှမျှတတ ဆိုတဲ့ စကားလုံးက …. ချိန်ခွင်ဗလာချည်းတောင် တဖက်စောင်းနေအောင် အလေးခိုးဖို့ ကာဗာလုပ်ထားတယ်လို့ .. .သိသာ ထင်ရှားစေပါတယ် … ။
ဒေါ်စုက နေပြည်တော်စည်းရုံးရေးခရီးမှာပြောပြီးသားပါ၊ပြည်သူတွေ၊လျှပ်စစ်မီးရွေးမလား၊ ဒီမိုကရေစီရွေး မလားတဲ့ ဒီမိုကရေစီရွေးလိုက်ရင်၊လျှပ်စစ်မီးကအလိုလိုပါလာပြီးသားပါတဲ့။
လေဖြတ်နေတဲ့လူနာဟာသူကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေပုံမှန်ပြန်ကောင်းဘို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလေ့ကျင့် ခန်းတွေ လုပ်ရမယ်၊သည်တော့ နာတာပြုတာရှိမယ်၊အနာမခံနိုင်လို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်တော့၊ ပုံမှန် လူကောင်းပြန် မဖြစ်နိုင်ဘူး၊မသန်မစွမ်းလူနာဘ၀နဲ့ပဲပြီးသွားမယ်တဲ့ဗျား။တစ်ဘ၀အတွက်ကောင်းဘို့၊ တစ်ခ ဏတော့ အနာခံကြရပါလိပ်မယ်။
ဟိုက်ရှားပါး…. အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် ဘက်ပြီးတော့.. ဖုန်းလိုင်းဘက်ကို ရောက်သွားပါလား….
” Who Dare Win ” is the motto of world best soldiers ( SAS, United Kingdom ).
We must dare to fight back.
There are two ways for you.
1> Will you die asahero whom bravely fighting back for the truth?
2> Will you live asaslave under unfair justice?
Now the chance to choose is only in your hand .
Don’t think for your self only, please think for your next generation also.OK?
How do you want to see your next generation? Freedom or Slave?
If you dare to fight, you will die only once.
If you surrender, you will die again and again.
ဘာလို့မကြိုဆိုရဲ့ ရမှာလည်း အေမီရှေ့ဆုံးက ကြိုဆိုမှာပဲ လာမတာနဲ့